ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमाको साधारण कारणहरू र उपचारहरूको तुलना गर्नुहोस् - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार, कल्याण समाचार कल्याण कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी भारी खेल
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा: कारण, लक्षण, उपचार, अधिक तुलना गर्नुहोस्
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा: कारण, लक्षण, उपचार, अधिक तुलना गर्नुहोस्
स्वास्थ्य शिक्षा ल्यूकेमिया र लिम्फोमा रक्त क्यान्सरका प्रकारहरू हुन्, तर विशिष्ट रूपमा भिन्न। यहाँ स्थितिको बिचको भिन्नता सिक्नुहोस्।
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा कारणहरू | Prevalence | लक्षण | निदान | उपचार | जोखिम कारक | रोकथाम | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू | संसाधनहरू
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा: के फरक छ?
ल्युकेमिया र लिम्फोमा दुबै प्रकारको रक्त क्यान्सर हो, त्यसैले तिनीहरूलाई भ्रमित गर्न सजिलो छ। जबकि ल्युकेमिया सामान्यतया अस्थि मज्जामा देखा पर्दछ, लिम्फोमा लिम्फेटिक प्रणालीमा शुरू हुन्छ र लिम्फ नोड्स र लिम्फ टिश्यूहरूलाई असर गर्दछ। ल्युकेमिया बच्चाहरूमा अधिक सामान्य हुन्छ, जबकि लिम्फोमा प्रायः वयस्कहरूमा निदान गरिन्छ। यस लेखमा हामी ल्युकेमिया र लिम्फोमाबीचका भिन्नताहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं।
ल्युकेमिया हड्डी मज्जा भित्र सेल परिवर्तनको परिणाम हो। जब सामान्य सेल ल्युकेमिया सेलमा परिवर्तन हुन्छ, यो बढ्न र सामान्य कोशिकाको विकास रोक्न सक्छ। जब ल्यूकेमिया कोशिका बढ्दै र विभाजन जारी रहन्छन्, तिनीहरू शरीरमा स्वस्थ कोशिकालाई पछाडि छोड्छन्। अधिक र अधिक स्वस्थ रक्त कोशिका ल्युकेमिया कोशिकाको साथ प्रतिस्थापन हुँदा, ल्यूकेमिया लक्षण देखा पर्न शुरू।
ल्युकेमिया को मुख्य प्रकारहरु:
तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सबै): बच्चाहरूमा ल्युकेमियाको सबैभन्दा सामान्य रूप
तीव्र मायलोइड ल्यूकेमिया (AML): सबैभन्दा धेरै वयस्क ल्यूकेमिया मध्ये एक
तीव्र प्रोम्यलोसाइटिक ल्युकेमिया (एपीएल): एएमएलको एक आक्रामक रूप जहाँ प्रोम्योलोसाइट्स (रगत बनाउने सेल) निर्माण गर्दछ र शरीरमा अन्य रक्त कोषहरूको संख्या कम गर्दछ।
कपाल सेल ल्युकेमिया (HCL): ल्युकेमियाको दुर्लभ रूप जुन सेतो रक्त कोषहरूको अत्यधिक उत्पादनले B लिम्फोसाइट्स भनिन्छ।
क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सीएलएल): वयस्कहरूमा सबैभन्दा सामान्य ल्युकेमिया
क्रोनिक मायलोइड ल्युकेमिया (CML): ल्युकेमियाको एक रूप जुन प्राय: क्रोमोजोम २२ मा जेनेटिक असामान्यताका कारण हुन्छ, जसलाई फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भनिन्छ
माईलोप्रोलिफरेटिभ नियोप्लाज्म (MPN): हड्डी मज्जा धेरै रक्त कोषहरू, जस्तै सेतो रक्त कोशिका, रातो रक्त कोषहरू, र प्लेटलेटहरू बनाउने परिणाम
प्रणालीगत मास्टोसाइटोसिस: शरीरमा मास्ट सेलहरू (सेतो रक्त कोषहरूको एक प्रकार) को निर्माण
लिम्फोमा स्वस्थ कोशिकाहरूको क्यान्सर कोषहरूमा परिवर्तनको परिणाम पनि हो, यद्यपि लिम्फोमाका वास्तविक कारणहरू थाहा छैन। लिम्फोमाको साथ, स्वस्थ लिम्फोसाइट (एक प्रकारको सेता रक्त कोष) ले उत्परिवर्तन गर्छ जुन द्रुत कोशिकाको उत्पादनको कारण गर्दछ। लिम्फोमा सामान्यतया बी लिम्फोसाइट (बी कोशिका) र टि लिम्फोसाइट्स (टी कोशिका) शरीर भरि सुरु हुन्छ।
लिम्फोमाका मुख्य प्रकारहरू:
नन-हजकिन लिम्फोमा (NHL): लिम्फोमाको सबैभन्दा सामान्य प्रकार जुन सामान्य रूपमा बी वा टी कक्षहरूमा शुरू हुन्छ
हजकिन लिम्फोमा (HL): क्यान्सरको सबैभन्दा उपचार योग्य प्रकार मध्ये एक, सामान्यतया B कोषहरूमा शुरू हुन्छ
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा कारणहरू
स्वस्थ रक्त कोशिकाको डीएनए उत्परिवर्तनले क्यान्सर कोषहरूको द्रुत उत्पादन गर्दछ
स्वस्थ लिम्फोसाइटको DNA म्युटेसनले बिरामी लिम्फोसाइट्सको छिटो गठनको कारण दिन्छ
यस अनुसार ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज २०२० मा लगभग ,०,530० मानिसहरूलाई ल्युकेमिया पत्ता लागेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र, त्यहाँ अनुमानित 666,5088 मानिस ल्युकेमियाबाट मुक्त हुने गरेका छन्।
प्लान बी काम पछि तपाइँ यसलाई लिनुहुन्छ
ल्युकेमिया र लिम्फोमा सोसाइटीले २०२० मा पनि भन्छ, होडकिनको लिम्फोमा (एचएल) को 8,480० र गैर-हडकिन्स (NHL) को 77 77,२40० घटनाहरू पत्ता लाग्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका 1 1 १, .50० मानिस २०२० सम्म लिम्फोमाबाट छुटको लागि जिउँदै रहेको अनुमान गरिएको छ।
ल्युकेमिया बनाम लिम्फोमा व्यापकता
२०२० मा ल्युकेमियाको ,०,530० घटनाहरू निदान गरिएको अपेक्षा गरिएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ल्युकेमियाबाट छुट पाउने अनुमानमा6376,50०8 मानिसहरू छन्।
२०२० मा हजकिनको लिम्फोमाका ,,480० घटनाहरू अपेक्षित थिए।
२०२० मा नन-हजकिनको लिम्फोमाका, 77,२40० घटनाहरू अपेक्षित थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका 1 1 १, .50० मानिस २०२० सम्म लिम्फोमाबाट छुटको लागि जिउँदै रहेको अनुमान गरिएको छ।
ल्युकेमियाको कारण लिम्फ नोडहरू ठूलो वा सूजन हुन सक्छ। सास फेर्न र थकान पनि सामान्य छ। ज्वरो, भोक कम हुनु, र कमजोरी सहित संक्रमण को संकेतहरु देखा पर्न सक्छ। छाला सजिलै चोट लाग्न सक्छ, वा एक व्यक्ति रक्तस्राव याद गर्न सक्दछ जुन वर्णन गर्न सकिदैन। बारम्बार संक्रमण पनि ल्यूकेमियाको लक्षण हुन सक्छ।
लिम्फोमा लिम्फेटिक प्रणालीको क्यान्सर हुने भएकोले लिम्फ नोडहरू सूजिएको छ। यी लिम्फ नोडहरू घाँटी, कोठो, बगल, छाती, वा पेटमा हुन सक्छन्। थकान, ज्वरो, र भोक कम हुनु पनि सामान्य हो। अन्जानमै वजन घटाउने र रातको पसीना बढ्न सक्छ जब बिमारी बढ्दै जान्छ।
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा लक्षणहरू
सूजन वा बढेको लिम्फ नोडहरू
अनजाने वजन घटाउने
ल्युकेमिया एक प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक वा विशेषज्ञ द्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ। एक चिकित्सा ईतिहास र शारीरिक परीक्षण प्राय: निदान प्रक्रियाको पहिलो चरणहरू हुन्छन्। रक्त परीक्षण कुनै पनि असामान्य सेतो रक्त कोष गणना, साथै असामान्य रातो रक्त कोष र प्लेटलेट गणनाहरूको लागि हेर्न गरिन्छ। अस्थि मज्जाको नमूना हड्डी मज्जामा ल्यूकेमिया कोशिका लिनको लागि लिन सकिन्छ। यसको लागि तपाईको शरीरबाट हड्डी मज्जा तरल पदार्थ हटाउन हिपमा लामो, पातलो सुई घुसाइन्छ। त्यसपछि तरल पदार्थ प्रयोगशालामा पठाइन्छ असामान्य कोशिकाको लागि जाँच गर्न।
लिम्फोमाको निदानको पहिलो चरणहरूमा गहन चिकित्सा इतिहास र शारीरिक परीक्षण समावेश छ। एक एन्कोलॉजिस्टले सूजन लिम्फ नोडहरू र / वा सुगन्धित अंगहरूको संकेतहरूको लागि जाँच गर्दछ। यदि लिम्फोमा संदिग्ध छ, लिम्फ नोडहरूको नमूना लिन सकिन्छ र अधिक परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिन्छ। रक्त कोषहरूको स्तर हेर्न रक्त परीक्षण पनि गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एमआरआई, सीटी, वा पीईटी स्क्यान सहित इमेजिंग अर्डर पनि गर्न सक्दछ।
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा निदान
अस्थि मज्जा बायोप्सी
इमेजि:: एमआरआई, सीटी, वा पीईटी स्क्यान
लिम्फ नोडहरूको बायोप्सी
ल्युकेमियाको लागि उपचार उमेर, ल्युकेमियाको प्रकार, र क्यान्सरको चरण सहित धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ।
केमोथेरापी सबैभन्दा ल्युकेमियासको लागि उपचारको सबैभन्दा सामान्य पहिलो रेखा हो। केमोथेरापी उपचारको क्रममा, औषधिहरू सम्पूर्ण शरीरमा ल्युकेमिया कोशाहरूलाई मार्न प्रयोग गरिन्छ। एकल औषधि वा धेरैको संयोजन उपचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक डाक्टरले सुरू गर्न उत्तम औषधि निर्धारण गर्दछ। लक्षित ड्रग थेरापी पनि कसैको लागि एक विकल्प हो, जहाँ लक्षित औषधीले क्यान्सर कोषहरूलाई सफलतापूर्वक मार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर निर्धारण गर्न शरीरमा ल्युकेमिया कोशिका परीक्षण गरिन्छ।
रेडिएसन थेरापी, क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गर्न उच्च उर्जा तरंगहरूको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया, ल्युकेमियाको लागि एक सामान्य उपचार विकल्प पनि हो। यसले हानिकारक क्यान्सर कोशिकाको प्रसार रोक्न मद्दत गर्दछ, तर प्रक्रियामा स्वस्थ कोशिकालाई नष्ट गर्न सक्छ।
अस्थि मज्जा ट्रान्सप्लान्ट (स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट) क्यान्सरले भरिएको हड्डी मज्जा हटाउन र यसलाई स्वस्थ हड्डी मज्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, क्यान्सर बिरामीहरूले अस्थि मज्जामा रहेका क्यान्सर कोषहरू मार्न केमोथेरापी र / वा विकिरण प्राप्त गरेपछि यो गरिन्छ। प्रत्यारोपणबाट स्वस्थ हड्डी मज्जाले बिरामी हड्डी मज्जालाई प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
इम्यूनोथेरापी पनि ल्युकेमियाको लागि एक उपचार विकल्प हो, जबकि ल्यूकेमिया भएका प्रत्येक व्यक्ति उम्मेदवार हुँदैनन्।
लिम्फोमा उपचार पनि क्यान्सरको अवस्थामा निर्धारणमा निर्भर गर्दछ। केही लिम्फोमाहरूको लागि, हेर्ने र प्रतीक्षा दृष्टिकोण क्यान्सर अगाडि बढ्न जारी छ कि भनेर हेर्न को लागी प्रयास गर्न सकिन्छ। लिम्फोमाका केहि रूपहरू एकदमै ढिलो-बढेको छ र परिवर्तन बिना धेरै वर्षसम्म हेर्न सकिन्छ। तपाईको एन्कोलॉजिस्टले यस रोगलाई नियमित शारीरिक जाँचहरू र रक्तचापको साथ रोगको निरीक्षण गर्दछ कि रोग वा स्थिर वा थप उपचार चाहिन्छ भनेर निर्णय गर्न।
केमोथेरापी प्राय: प्रायः लिम्फोमाहरूको लागि पहिलो-लाइन उपचार हो। औषधी या त मौखिक रूपमा वा IV को माध्यमबाट कोशिकाको वृद्धि रोक्न र हानिकारक क्यान्सर कोषहरू नष्ट गर्न प्रशासित गरिन्छ। विकिरण पनि हानिकारक क्यान्सर कोषहरूको डीएनए बिगार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण बिरामी हड्डी मज्जालाई स्वस्थ अस्थि मज्जाको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नयाँ अस्थि मज्जाले शरीरलाई नयाँ रातो र सेतो रक्त कोषहरू र प्लेटलेटहरू बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को साइड इफेक्ट कठोर छन्, त्यसैले यो सधैं सबैको लागि एक उपचार विकल्प छैन।
इम्यूनोथेरापी पनि एक विकल्प हो। सक्रिय क्यान्सरका साथ केहि व्यक्तिहरू, र साथै छुटकारामा परेका, नयाँ र विकासशील क्यान्सर उपचारहरूको प्रयास गर्न क्लिनिकल परीक्षणहरूमा भाग लिन योग्य हुन सक्छन्।
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा उपचार
लक्षित ड्रग थेरापी
केहि व्यक्तिहरुमा अरूलाई भन्दा ल्युकेमिया हुने जोखिम बढी हुन्छ। विकिरण र अन्य आणविक विषाक्त पदार्थहरूको संपर्कमा ल्युकेमिया विकासको जोखिम बढ्न सक्छ। धूम्रपान नहुनुले तपाईको जोखिमलाई पनि बढाउन सक्छ। केही क्यान्सरहरू र विकिरण वा किमोथेरापीको जोखिमले पछि ल्युकेमिया विकासको उच्च सम्भावना निम्त्याउन सक्छ।
क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया (सीएलएल) को पारिवारिक इतिहास हुनु, विशेष गरी आमा बुबा, बच्चा, वा रगत भाइबहिनीमा, तपाईंलाई सीएलएल आफैलाई विकास गर्ने बढी जोखिममा पार्छ। यस अनुसार आनुवंशिक र दुर्लभ रोग जानकारी केन्द्र , लगभग १०% सीएलएल भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाको पारिवारिक इतिहास छ।
माईलोडस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम (MDS) हड्डी मज्जा विकारहरूको समूह हो जुन रगत कोषहरूको विकासको तरीकालाई असर गर्दछ। MDS ले असामान्य रगत र हड्डी मज्जा कोशिकाको विकासको कारण गर्दछ। जब गम्भीर हुन्छ, एमडीएस लेकिमिया हुन सक्छ।
ठूलो उमेर Non० बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरुमा निदान गरिएको नॉन-हजकिन लिम्फोमा (एनएचएल) को शीर्ष जोखिम कारकहरू मध्ये एक हो। एनएचएलको पारिवारिक इतिहास पहिलो डिग्री नातेदारमा हुनु पनि यसले जोखिम बढाउँछ NHL। यद्यपि थप अनुसन्धान आवश्यक छ, केही झार र कीरा मार्ने रसायनको संपर्कले एनएचएलको जोखिम बढाउन सक्छ। अन्य ज्ञात जोखिम कारकहरू विकिरण जोखिम, प्रतिरक्षा प्रणाली डिसफंक्शन, र केही स्वत: प्रतिरक्षा अवस्था समावेश गर्दछ।
हजकिनको लिम्फोमा (HL) का जोखिम कारकहरूमा मोनोन्यूक्लिओसिसको ईतिहास हुनु समावेश छ। HL प्रारम्भिक र ढिलो वयस्कता मा अधिक सामान्य छ र विकास हुन्छ पुरुषमा अधिक अक्सर महिला मा भन्दा। HL भएको परिवारको सदस्य हुनुले पनि तपाईको जोखिम बढाउँदछ। एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली अर्को ज्ञात जोखिम कारक हो।
ल्युकेमिया बनाम लिम्फोमा जोखिम कारक
अघिल्लो विकिरण वा किमोथेरापी
.० बर्ष भन्दा माथिको
एनएचएलको साथ पहिलो डिग्री सम्बन्धित
झार हत्यारा र कीटनाशकको ​​एक्सपोजर
प्रतिरक्षा प्रणाली डिसफंक्शन
केहि अटोइम्यून सर्तहरू
प्रारम्भिक र ढिलो वयस्कता
HL को साथ परिवारको सदस्य
स्तनपान भएको बच्चाले ल्यूकेमिया हुने जोखिम कम गर्न देखाईएको छ। सीमित विकिरण एक्सपोजर लेकिमियाको जोखिमलाई पनि कम गर्न सक्छ। धूम्रपान र विषाक्त पदार्थहरूको जोखिमबाट बच्न तपाईंलाई कम जोखिममा पनि पुर्‍याउँछ। स्वस्थ तौल र जीवनशैली कायम राख्न क्यान्सरको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
लिम्फोमा रोक्न निश्चित जोखिम कारकहरू कम गर्न निर्भर गर्दछ। किनकी विकिरण जोखिम लिम्फोमाका लागि जोखिमको कारक हो, सम्भव भएसम्म धेरै एक्स्पोरहरू त्याग्न महत्त्वपूर्ण छ। केहि अनुसन्धान सुझाव दिन्छ कि अत्यधिक तौल वा मोटो हुनु NHL को विकासको जोखिम बढाउन सक्छ, यसैले स्वस्थ तौल कायम गर्न NHL को जोखिम कम गर्न सक्दछ।
ल्युकेमिया विरुद्ध लिम्फोमा कसरी रोक्न सकिन्छ
बच्चाको रूपमा स्तनपान गराउनु
स्वस्थ तौल र जीवनशैली कायम राख्नुहोस्
धुवाँ र विष जोखिमबाट बच्नुहोस्
सम्बन्धित: Things चीजहरू जुन तपाईं क्यान्सरबाट बच्न सक्नुहुन्छ
जब ल्युकेमिया वा लिम्फोमाको लागि डाक्टरलाई भेट्न
यदि तपाईंलाई ल्युकेमिया वा लिम्फोमाको कुनै लक्षण छ भने, तपाईंले तुरून्त स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भ्रमण गर्नुपर्छ। ल्युकेमिया र लिम्फोमाका लक्षणहरूले धेरै अन्य अवस्थाहरूको नक्कल गर्दछ जसले गर्दा यसलाई निदान गर्न केही गाह्रो हुन्छ। शुभ समाचार यो छ कि रक्तचाप प्रायः पहिलो रेखाको निदानात्मक परीक्षण हो प्राय जसो सर्तहरूको लागि र रगत कोशिका असामान्यताहरूको लक्षणहरू लिन सक्छ जुन ल्युकेमिया र लिम्फोमा दुबैमा हुन सक्छ।
ल्युकेमिया र लिम्फोमाको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ल्युकेमिया र लिम्फोमाबीच के भिन्नता छ?
ल्युकेमिया रगतको क्यान्सर हो जुन हड्डीको मज्जा र रगतमा विकसित हुन्छ। लिम्फोमा रगतको क्यान्सर पनि हो, तर लिम्फ नोड्स र लिम्फ टिश्युहरू लगायत लिम्फेटिक प्रणालीलाई सामान्यतया असर गर्दछ।
के ल्युकेमिया लिम्फोमामा परिणत हुन सक्छ?
जेहुकै दुर्लभ भए पनि, रिक्टरको सिन्ड्रोम भनेर चिनिने एक जटिलता केहि मानिसहरुमा हुन सक्छ। रिक्टरको सिन्ड्रोम विकसित हुन्छ जब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया वा सानो लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया अचानक ठूलो सेल लिम्फोमाको रूपमा विकसित हुन्छ।
कुन बढी आक्रमक हो: ल्यूकेमिया वा लिम्फोमा?
लिम्फोमाको लागि बाँच्ने दर ल्युकेमिया भन्दा उच्च छ। यस अनुसार ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज , सबै leukemias संयुक्त को--वर्ष अस्तित्व दर 65 65..8 प्रतिशत छ। हजकिनको लिम्फोमाका लागि-बर्षको अस्तित्व दर २०० and र २०१ between बीच .5 88..5% थियो।
लिम्फोमा र ल्यूकेमिया दुबैको लागि सबैभन्दा साधारण उपचार के हो?
लिमोफोमा र ल्यूकेमिया दुबैका लागि किमोथेरापी सबैभन्दा सामान्य उपचार हो।
हेर्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस् , ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज
स्टेम सेल प्रत्यारोपण , ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज
लिम्फोमा , राष्ट्रिय क्यान्सर संस्थान
तथ्य र तथ्या .्क , ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाज
ल्युकेमियाको लागि जोखिम कारक , मेमोरियल स्लोन केटरि Cance क्यान्सर केन्द्र
क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया , जेनेटिक र दुर्लभ रोग जानकारी केन्द्र
ल्युकेमिया रोकथाम , Leukemia फाउंडेशन
Foods खाद्य पदार्थ तपाईलाई औषधिसँग मिसिन गर्नु हुँदैन
कसरी स्वस्थ रहन यदि तपाईं एक प्रतिरोधक पदार्थ लिइरहनुभएको छ
वियाग्रा मा सक्रिय सामग्री के हो
के एक मानिस आफ्नै खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्छ?
ranitidine 150 मिलीग्राम बनाम ओमेप्राज़ोल 20 मिलीग्राम
Pseudoephedrine र phenylephrine बीच के फरक छ?
इन्फ्लुएन्जा प्रकार ए को लागी इन्क्युबेशन अवधि के हो?
तपाइँ कसरी योजना बी गोली लिनुहुन्छ?
सबैभन्दा राम्रो औषधि एक चिसो छिटो बाट छुटकारा पाउन